Mkpụrụ Semalt Na-enye Nhazi nke Kọmputa Kọmputa
Nje virus kọmputa bụ usoro obi ọjọọ nke na-eme onwe ya ma gbanwee usoro kọmputa ndị ọzọ site na ịtinye koodu ya kpọmkwem n'ime ha. Mmemme ọjọọ ma ọ bụ nje na-ebute ọtụtụ ngwaọrụ na imepụta ọgba aghara maka ndị mmadụ na mgbasa ozi. N'ebe a, Alexander Peresunko, Semalt Onye Ahịa Gbasara Onye Na - ahụ Maka Nlekọta, ekwuwo banyere ụdị isi kọmputa nke kọmputa.
Nje Virus Ngwá Agha
Mgbe akpụkpọ ụkwụ kọmputa, kọmputa a kapịrị ọnụ kpọmkwem na diski ha. Usoro ndị a na-ebu usoro sistemụ, dị ka Linux, Unix, na Windows. Mgbe usoro nhazi ahụ kwusịrị, ị nwere ike ịlele ma gbanwee ntọala nke ngwaọrụ kọmputa gị. A maara koodu ahụ dịka akụrụngwa akụrụngwa ma nọrọ na diski disk kọmputa gị ruo nwa oge ma ọ bụ na-adịgide adịgide. N'ụbọchị ndị a, anyị anaghị ahụkarị sistemụ kụrụ akpụkpọ ụkwụ na ịntanetị, ma ha dị na otu ụdị ma ọ bụ nke ọzọ ma nwee ike imebi ọrụ nke usoro kọmputa gị.
Mmemme ma ọ bụ Njikwa Njikwa
Mmemme ma ọ bụ faịlụ faịlụ na-ebute faịlụ mmemme gị na faịlụ kọmputa n'ime sekọnd. Ọtụtụ mgbe, ha na-emetụta faịlụ na C ụgbọala nke ngwaọrụ gị yana Windows na njikwa dịka .exe, .com, .bat, .sys, na .pif. A na-arụ ọrụ nje ndị a na ngwaọrụ gị na-akpaghị aka ma gbanwee data nke usoro kọmputa gị..Nje virus a nwere ike ịbanye na ebe nchekwa ahụ ma nwee ike igbanwe onwe ya na faịlụ.
Otu nje virus na-emetụta faịlụ gị, akwụkwọ ntanetị, na ihe ngosi na ụlọ ọrụ Microsoft Office. Ha tinye koodu ha ma nyefee faịlụ ọ bụla mgbe ọ bụla ị mepee ihe ngosi ma ọ bụ akwụkwọ ederede na ntanetị. Ụbọchị ndị a, ọtụtụ nje virus anaghị adịkarị, ha adịbeghịkwa ụkọ.
Ịnyịnya nke Troy ma ọ bụ Trojan ịnyịnya
Okwu a, ịnyịnya ịnyịnya Trojan, sitere na akwụkwọ ndị mara mma nke akwụkwọ banyere agha n'etiti ndị Gris na ndị dike nke obodo Troy. Ya mere, aha ahụ amalitela, ndị ịnyịnya Trojan na-echekwa faịlụ ụfọdụ na ngwaọrụ ndị ọrụ. Ndị nje ndị a na-abata n'ime usoro gị ma tinye ya na akpaghị aka. Mgbe ahụ, ndị na-agba ọsọ na-eji Trojans maka izu ohi ozi gbasara gị dịka PayPal ID, nkọwa data kaadị akwụmụgwọ, aha njirimara, okwuntughe na ozi ndị ọzọ. The Trojans backdoor dị iche na nkịtị Trojans na ụzọ ha na-emeghe na a backdoor, ikwe ka ndị na-agba ọsọ na-achịkwa ngwaọrụ kọmputa gị. Ihe adware na spyware na-egbochi ngwaọrụ gị ma gbanwee ntọala ihe nchọgharị ahụ na oke. Ha na-ebelata ngwaọrụ gị ma jiri usoro mgbasa ozi dị iche iche kpuchie usoro gị. Ọ gaghị abụ ihe ọjọọ ịsị na adware na spyware dị nnọọ ebe nile karịa backdoor Trojans ma dị ugbu a na ọ fọrọ nke nta niile ngwaọrụ na keygen faịlụ.
Nkịta bụ nje na-agbasa ngwa ngwa. Ọ nwere ike banye n'ime kọmputa gị ma bibie ọtụtụ faịlụ dị jụụ. Nje virus nwere ike igbu gị Wi-Fi ma kwụsị ọrụ nke ngwaọrụ gị. Ndị na-eme ọnyà na-ama ọnyà ma maa ndị enyi ha, ndị ikwu, na ndị ahịa ha. Ọ bụ iwu na ị gaghị emeghe njikọ email nke sitere na isi mmalite ndị a na-amaghị. Ndị ọkachamara na kọmpụta na-ekwu na ikpuru nwere ike gbasaa na geometric na-aga n'ihu ụwa. Dịka ọmụmaatụ, Mellisa na Ịhụnanya Letter emetụtawo ọtụtụ narị puku ngwaọrụ n'ụwa nile.
Rootkits bụ usoro ngwanrọ nke gụnyere usoro dịgasị iche iche iji kpochapụ usoro kọmputa ahụ, na-eme ka ọ dị mfe maka ndị omempụ ịwakpo usoro gị. Rootkits nwere ike imebi ngwaọrụ gị; ha na-egbochi gị ịnweta Task Manager, Editor Registry, na faịlụ ndị yiri ya.